Dowladda oo cambaareysay shan qof oo isku qoys ahaa oo lagu dilay Waajid – AfmoNews
Dowladda oo cambaareysay shan qof oo isku qoys ahaa oo lagu dilay Waajid
Wasiirka Cadaaladda Somaliya, Cabdulqaadir Maxamed Nuur (Jaamac) ayaa si kulul u cambaareeyay toddobadii qof ee xalay lagu laayay Degmada Waajid ee Gobolka Bakool.
Dadkan oo ay ku jiraan saddex carruur iyo laba haween ah ayaa waxaa la sheegay inay dileen rag hubeysan, ka dib markii ay u dhaceen hoygii ay deganaayeen.
Wasiirka Cadaaladda ayaa umadda Soomaaliyeed kaga tacsiyadeeyay ficilka guracan ee qoyskaasi lagu laayay, isagoona yiri “Waxaan guud ahaan umadda Soomaaliyeed uga tacsiyadeynayaa qoyskii Soomaaliyeed ee xalay si wadar ah Al Shabaab ugu laayeen Degmada Waajid, iyagoo gurigooda jiifa.”
Wasiir Jaamac ayaa sheegay in ficilka ceynkaasi oo kala ah ay gaystaan waxa uu ugu yeeray damiir laawayaasha Al Shabaab.
“In hooyo uur leh iyo carruur la laayo keliya waxay ka suurowdaa damiir laawayaasha Al Shabaab. Waxaan qoyskii, qaraabadii iyo dhammaan reer Waajid leeyahay samir iyo iimaan Ilaahey hanaga siiyo, iyagana qabrigooda Allaha u waasaciyo, Janatul Firdowsana ka waraabiyo.” Ayuu yiri Wasiir Jaamac.
Maamulka Gobolka Bakool iyo kan Degmada Waajid ayaa sidoo kale waxa ay masuuliyadda weerarkaasi ku eedeeyeen Ururka Al Shabaab.
Cali Nuur Cali (Cadhood) oo sheegay inuu yahay aabaha dhalay hooyadii qoyska ayaa sheegay in dadka la dilay ay isugu jiraan hooyo, aabe, saddex carruur ah oo ay dhalleen iyo laba qof oo marti u ahayd, oo middi ay haweeney tahay.
Cali Nuur Cali oo la hadlay BBC ayaa sheegay inaanu garanayn sababta dadkaasi loo laayay, balse uu u maleynayo in loo dilay uun aabaha qoyska oo ka tirsanaa Ciidamada Dowladda.
Dhacdadan ayaa dareen argagax leh ku beertay dadka deegaanka, iyadoona noqotay midda loogu hadalhaynta badan yahay deegaanada Koonfur Galbeed.